Cali Guudlaawe oo isu sharaxay xilka Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Hirshabelle – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Guudlaawe Xuseen ayaa isku sharxay xilka Madaxweyne kuxigeenka Maamulka goboleedka Hirshabeelle, inkastoo aanu wali si rasmi ah ugu dhawaaqin.
Ilo ku dhow dhow Guddoomiye Cali Guudlaawe ayaa sheegaya in maalmaha soo socda lagu wado inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo inuu u sharaxan yahay Madaxweyne kuxigeenka Maamulka labada Gobol oo dhismahiisa ka socdo magaalada Jowhar.
Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha ayaa waxaa isu soo sharaxay Musharaxiin ka soo jeeda Gobolka Hiiraan, iyadoo Musharaxii u dambeeyay ee isa soo sharaxay uu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Waare.
Is bedelkii lagu sameeyay shaxdii awood qeybsiga ee maamulka labada gobol ayaa keenay in Madaxweynaha ay qaataan Gobolka Hiiraan, caasimada maamulkana laga dhigo Shabeellaha Dhexe, waxaana ay u badan tahay in Madaxweyne kuxigeenkana ay qaataan Shabeellaha Dhexe.
Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo la dhaariyay maalin ka hor ayaa shalay doortay hoggaan cusub oo kumeel gaar ah, kaasoo durbaba ku dhawaaqay in araajidooda soo bandhigaan musharaxiinta u taagan xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo kuxigeenadiisa.
Sida qorshuhu yahay 12-ka bishan oo ku beegan maalinta berri ayaa lagu wadaa in la doorto Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa kuxigeen, halka Madaxweynahana lagu wado kama dambeys 15-ka la soo doorto.
Shirka Jowhar ayaa maraya marxaladii u dambeysay ee dhismaha maamulka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana shalay gaaray magaalada Jowhar labo ka mid ah saddexdii oday dhaqameed ee fadhigooda ahaa magaalada Beledweyn, waxaana ka mid ah Ugaas Cali Ugaas Muxumed Ugaas Shafeec iyo Ugaas Cali Ugaas Xassan Ugaas Rage, iyadoo Beledweyn uu ku haray Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo wali ka soo hor-jeeda shirka.
Ninkii waday gaari shalay ku qarxay magaalada Muqdisho oo la soo bandhigay (Daawo Sawirro)